यौन शक्ति बढाउन अढाई वर्षे बालकको घाँटी रेटेर बली दिए यी व्यक्तिले….::Leading Nepal News
यौन शक्ति बढाउन अढाई वर्षे बालकको घाँटी रेटेर बली दिए यी व्यक्तिले….
जेठ १७, काठमाडौं । जनकपुर– वैशाख २३ गते अपरान्ह अढाई वर्षका बालक समीर (आर्यन) साह आँगनमा खेलिरहेका थिए । आमा रेणुदेवी नजिकैको बारीमा घाँस काट्दै थिइन् । छिमेकका सत्रुघ्न महतो नजिकैको इनारबाट पानी तानिरहेका थिए, जसलाई आर्यन ‘बाबा’ भनेर सम्बोधन गर्थे । बालक एक्लै खेलिरहेको बेला महतोले देखे । त्यसपछि आएर उनलाई आफ्नो घरमा लगेर अनि भैंसीको दूध दूहेर आर्यनलाई खुवाएर सुताए । परिवारले आर्यनलाई खोज्न थालेपछि उनी आर्यनलाई बोकेर नजिकैको झाडीमा लुके । साम्य भएपछि घर फर्किएका उनले त्यसको भोलिपल्ट पूजापाठसहित आर्यनको घाँटी रेटेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । पत्रिका लेख्छ–२५ दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले आर्यन हत्याको यो डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै नेपाल समाचारपत्रमा छापिए अनुसार आफूमा भएको दैवी शक्ति बढाउने नाममा नरबली दिने धनुषाको मिथिला नगरपालिका ६ ढल्केबरका शत्रुधन महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यौनशक्ति कम हुदै गएपछि महतोले दैबी शक्ति र यौनशक्ति बढाउने नाममा छिमेकी शम्भु साहको अढाइ बर्षीय छोरा समिरकुमार साहको हत्या गरेको खुलासा भएको छ ।गत बैशाख २४ गते महतोले आर्यनको हसियाले रेटेर बली दिएको २ नम्वर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बैशाख २३ गते दिउसो एकाएक समिरकुमार हराएपछि घरपरिवारले खोजी गरेपनि उनी फेला परेका थिएनन ।
अन्धबिश्वासमा बिश्वास गर्दै आएका महतोले आफूमा अपार दैवीशक्ति पाउन र यौनइच्छालाई दर्बिलो बनाउन बालको बलि चढाएको प्रहरीलाई बताएका थिए ।उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा २ बर्ष देखि श्रीमतीसंग शारिरिक संभोग नगरेको र नरवली दिएपछि यौन शक्ति तथा दैवी शक्ति बढ्ने सुनेको कारण समिरकुमारको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।